अब मोबाइलको एसएमएस पनि जिमेलमा ! - E Net Nepal
Home Technology अब मोबाइलको एसएमएस पनि जिमेलमा !
अब मोबाइलको एसएमएस पनि जिमेलमा !
E NET NEPAL 8:00 PM Technology,
के तपाईको मोबाइलमा मेसेजहरु धेरै भएर दिक्क हुनुहुन्छ तर मेसेजको महत्वका कारण मेसेज डिलेट गर्न पनि सकिरहनुभएको छैन । त्यसो भए तपाई पक्कै चाहनुहुन्छ की मेसेजहरु कुनै पनि तरिकाबाट सुरुक्षित होउन । उसो भए अब ढुक्क हुनुहोस तपाईले कुनै मेसेज पनि गुमाउनु पर्दैन । तपाईको मोबाइलका सबै मेसेजहरु तपाई अब सजिलै जिमेलमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ । यसको लागि तपाईले कुनै अतिरिक्त चार्ज पनि तिर्नुपर्दैन । न त तपाईले कुनै हाइटेक स्टेप उठाउने पर्नेछ । तर तपाईसंग एन्ड्रोइड फोन हुनु भने एकदमै जरुरि हुन्छ ।
सबै भन्दा पहिले तपाईले आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा एसएमएस ब्याकअप प्लस(SMS Backup Plus) नामको एउटा एप्लिकेशन राख्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई तपाई https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zegoggles.smssync&hl=en मा गएर इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ । अब तपाईले आफ्नो जिमेल एकाउन्टको सेटिंगमा गएर आइम्याप अप्शनलाई इनेबल गर्नुहोस ।
जिमेलमा सेटिंग गरिसकेपछि तपाई आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलमा एसएमएस ब्याकअप प्लस (SMS Backup +) एप्लिकेशन ओपन गर्नुहोस । ओपन गरिसकेपछि एप्लिकेशनमा जिमेलको सेटिंग गर्नुहोस । जिमेल सेटिंगको लागि तपाइले एप्लिकेशनबाट जिमेलमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसपछि अब तपाईको जिमेल एकाउन्टले तपाईको मेसेज (एसएमएस) पनि सजिलै स्वीकार गर्छ ।
एप्लिकेशन सेट गर्न थप केहि जानकारी चाहिएमा तपाई http://backup-to-gmail.cpedia.net/
मा जान सक्नुहुन्छ ।
By E NET NEPAL at 8:00 PM